Nohamafisin’ny fanambarana ofisialin’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena izany. « Ankoatra ny famindrana ny olona amin'ny toerana azo antoka dia efa nirotsaka an-tsehatra amin'ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa sy famahana ny lalana ahafahana mifamoivoy ny Tafika malagasy amin'ny faritra Ambatondrazaka iny hoentina mamerina amin'ny fotoana faran'izay haingana ny fiainana andavanandron'ny mponina toy ny hita amin'ny sary. »
Tsahivina moa fa maro ireo lalana tapaka tamin’iny herinandro iny. Niova tanteraka ny fiovan’ny mponina amin’ny fiainana manoloana ireo asa fivelomana. Potika ihany koa ireo voly avotra sy karazan’anana tamin’iny faritra iny, noho ny tondra-drano. Voalaza koa fa ahiana mety hisy vokany amin’ny vary izany amin’ny vanim-potoana miaka-bokatra.